Ukunyuka - umngcipheko othathelwa phantsi I-Surges ngumngcipheko ojongelwa phantsi. Ezi mpembelelo zevolthi (zomzuzwana) ezithatha isahlulo sesibini kuphela zibangelwa kukuhlasela ngokuthe ngqo, okufuphi kunye nokude kombane okanye ukutshintshela ukusebenza kwesixhobo samandla. Ukubetha ngokuthe ngqo nangaseduze ngqo okanye kufutshane ...
I-4 yeHlabathi yoKhuselo loKhuseleko lwaMazwe ngaMazwe
INgqungquthela yesi-4 yaMazwe ngaMazwe malunga noKhuseleko loMbane iya kubanjelwa e-Shenzhen China nge-25 ka-Okthobha ukuya kuma-26. INkomfa yaMazwe ngaMazwe malunga nokuKhuselwa kombane ibanjelwe e-China okokuqala. Iingcali zokukhusela umbane e-China zinokuba zezasekhaya. Ukuthatha inxaxheba kwiprofayili ekumgangatho wehlabathi ...
Ukunyuka kunye nokukhuselwa
Umonakalo obangelwe kukuhamba kombane okwethutyana okanye esinye sezona zinto zibangela ukungaphumeleli kwezixhobo zombane, kukuhamba nje kwexesha elifutshane, ukubetha kwamandla amakhulu okusetyenziswa kwinkqubo yamandla yesiqhelo nje ukuba isekethe itshintshe ngesiquphe. kwiintlobo ezahlukeneyo ezimuncu ...